Covid-19 eto Madagasikara Tranga 238 tao anatin’ny herinandro
Ny 11 mey no nisian’ilay tenin’ny Filoham-pirenena fa 105 tamin’ny 171 ny sitrana tamin’ireo marary teto Madagasikara nentina nanaporofoana fa tena mahomby tambavy Malagasy CVO
manoloana ny kihana nataon’ny OMS. 171 ny fitambaran’ny voa rehetra, ka 68 no mbola nanaraka fitsaboana ny 11 mey. Tapa-bolana katroka aty aoriana, dia tafiakatra 542 ny voa hatramin’ny omaly 25 mey, ary 145 ny sitrana. Niampy 371 be izao ny olona voa, ary 79 no sitrana tao anatin’ny tapa-bolana. Midika io fa kely ny sitrana ary mitombo be ny isan’ny voa. Tao anatin’ny herinandro farany dia ny alatsinainy 18 mey hatramin’ny omaly 25 mey dia nahatratra 238 ny tranga vaovao, izany hoe 30 isan’andro eo ny voa, raha hatao ny kajikajy, ary 5 isan’andro eo ny sitrana raha kajiana ny tapa-bolana. Mitombo isan’andro ny isan’ny voa, izay tena ambony mitaha amin’ny sitrana na efa manana ny tambavy CVO izay efa fitsaboana sady fisorohana isika. 7 na 8 andro eo fitsaboana amin’ny tambavy CVO, raha ny fanazavana teknika nentina tany aloha sy mbola nohamafisin’ny Minisitry ny serasera omaly, saingy vitsy aloha ny sitrana hatreto. Vao andro maromaro izay no niresaka tamin’ny Sekretera Jeneralin’ny OMS, ary tapaka fa hatolotra hatao andrana na “essai technique” ny CVO sy ny kamba-panafody roa miendrika tsindrona. Andrasana ny mety ho tatitra mahakasika izay andrana izay, fa ny fitsaboana aloha tsy afa-miandry an’izay. Raha mahay mamaky ny antontan’isa ny fanjakana, dia mahay ny zavatra tokony hataony. Marina fa misy ny fepetra fa afaka manaraka izany antsakany sy andavany ve ny olona eo anatrehan’ny fahasahiranana? Mila tohizana sy hitarina ny tohana ara-tsosialy, mila hampitomboina ny fampitaovana, ny serasera,... Miandry fandraisan'andraikitra matotra sy mahomby kokoa avy amin'ny fitondram-panjakana ny olom-pirenena, raha ny resaka re etsy sy eroa.